Foko sy Fiaviana · Septambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Foko sy Fiaviana · Septambra, 2010
Tantara mikasika ny Foko sy Fiaviana tamin'ny Septambra, 2010
Oseania 26 Septambra 2010
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 13 Septambra 2010
Azia Atsinanana 05 Septambra 2010
Amerika Avaratra 03 Septambra 2010
Ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany any Amerika Avaratra dia mizara olana maro mitovy amin'ireo olom-pirenena any amin'ny tontolo an-dàlam-pivoarana. Misy mandrakariva ny fahantràna na dia manan-karena foana aza ireo tanin-dry zareo amin'ny harena an-kibon'ny tany. Mitatitra ny fifandirana farany momba ny harena ara-kibon'ny tany ireo mpitoraka blaogy
Etazonia: Naverina nodinihana indray ny fanambarana mikasika ny zon'ny vazimba
Niverina nandinika indray ny governemanta Amerikana ary mangataka ny fandraisan'anjaran'ny vahoaka mikasika ny Fanambaran'ny Firenena Mikambana mikasika ny Vahoaka Vazimba taorian'ny nandavany izany tamin'ny taona 2007.
Ghana: Italiana ve i Mario Balotelli sa Ghaneana ?
Afrika Mainty 02 Septambra 2010
Italiana ve i Mario Balotelli sa Ganeana? Izany no fanontaniana mipetraka nahatonga adihevitra mafana amin'ny aterineto . Mpilalao baolina kitra mpamono baolina milalao ho an'ny tanànan'i Manchester i Mario Barwuah Balotelli ary ao amin'ny ekipam-pirenena Italiana. Nateraky ny mpifindra monina Ganeana tany Italie izy